ग्रीष्म neतुमा पढ्न न्युरोएडिकेसनमा books पुस्तकहरू गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 31/05/2021 22:54 | सुझावहरू
ग्रीष्मकालीन वर्षको एक पटक हो जुन धेरै पाठकहरूले रमाइलोसँग संबद्ध गर्छन् पढाई. न्यूरोडिक्टेसन तातो शीर्षकहरूमा एक हो। र, यसैले तपाईले यस क्षेत्रमा विशेष पुस्तकहरू पाउन सक्नुहुन्छ। प्रशिक्षण र अध्ययनहरूमा हामी तपाइँको गर्मी पढाईहरूमा तपाइँलाई प्रेरित गर्नको लागि शीर्षकहरूको चयन साझा गर्दछौं। ग्रीष्म readतुमा पढ्नको लागि न्युरोडुकेसनमा पाँचवटा पुस्तक!
1 न्यूरोडिकेसन: तपाई आफूले मन पराउने कुराहरु मात्र सिक्न सक्नुहुन्छ
2 Neuroeducation को Agora। बुझाइएको र लागू गरिएको
3 शिक्षकहरूका लागि न्यूरोसाइन्स
4 सिक्न सिक्दै
5 बच्चाको दिमागले अभिभावकलाई समझायो
न्यूरोडिकेसन: तपाई आफूले मन पराउने कुराहरु मात्र सिक्न सक्नुहुन्छ
सिक्ने प्रक्रियालाई असर गर्ने कारकहरू के-के हुन्? फ्रान्सिस्को मोरा द्वारा लेखिएको यो पुस्तकले यस प्रश्नको जवाफ प्रस्ताव गर्दछ। यो पुस्तक २२ अध्यायहरू मिलेर बनेको छ जसमा पाठकले कुञ्जी अवधारणाहरू मार्फत सिक्ने जादूमा उत्साह पुर्‍याउँछ: भावना, समानुभूति, जिज्ञासा, ध्यान, स्मृति, नवीनता...
सब भन्दा महत्वपूर्ण सीखने भावनाको मूल्य संगै छन्। जब एक विद्यार्थीले उसलाई मन परेको विषयमा प्रवेश गर्दछ, उसको एकाग्रताको स्तर सुधार हुन्छ र समय परिवर्तनको बारेमा उसको धारणा परिवर्तन हुन्छ। सबै कुरा यस सन्दर्भमा अधिक सजीलो बग्दछ। परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ जब ऊ एकदम जटिल विषयको अध्ययन गर्न खोज्छ र उसलाई बोर गर्छ।
Neuroeducation को Agora। बुझाइएको र लागू गरिएको
यो काम Iolanda Nives de la Vega Louzado र Laia Lluch Molins को सहकार्यमा लेखिएको हो। यो एक परियोजना हो जुन यस मुद्दामा प्रतिबिम्बित गर्न बहस र सहकार्यबाट उत्पन्न हुन्छ। एक मिटिंग ठाउँ जसले अध्ययनको यस वस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ: शिक्षा र उत्कृष्टताको खोजी मार्फत स्थिर विकासको लागि यसको क्षमता.
यो शिक्षक, परिवार र प्रशिक्षण क्षेत्र मा काम पेशेवरहरु को लागी एक रोचक पुस्तक हो। पुस्तक यस क्षेत्र मा एक बेन्चमार्क हो विज्ञहरु मार्फत यस मुद्दा लाई उद्धरण गर्दछ।
शिक्षकहरूका लागि न्यूरोसाइन्स
यो काम, जुन पेशेवरहरूको उद्देश्यका बारे हो जुन विद्यार्थीलाई सिक्ने साहसिक कार्यमा साथ दिन्छन्, वर्णन गर्दछ सबै पेशेवरहरु सधैं मस्तिष्क को बारे मा जान्न चाहन्थे। यो काम सामान्य जनताको लागि सरल र बुझ्ने भाषाको माध्यमबाट न्यूरोडिकेसनमा आकर्षित गर्दछ।
डेभिड बुएनो आई टोरेन्स, यस पुस्तकका लेखक, आनुवंशिकी अनुसन्धानकर्ता र बार्सिलोना विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। उनले प्रतिष्ठित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा एक अनुसन्धानकर्ताको रूपमा सहयोग पनि गरेका छन्। यो ध्यान दिनुहोस् कि न्यूरोसाइन्सले शिक्षा र प्रशिक्षणको दुनियामा महत्वपूर्ण योगदान गर्दछ। तसर्थ, यो कार्य शिक्षकहरूको लागि धेरै चाखलाग्दो हुन सक्छ जसले विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित, शिक्षित र तालिम दिन्छन्।
कामको उपशीर्षक निम्नानुसार छ: दिमागले कसरी सिक्छ भनेर पत्ता लगाएर सिक्ने तपाईंको क्षमतालाई सुधार गर्नुहोस्। यो हेक्टर रुइज मार्टेनले लेखेको पुस्तक हो। पेशेवर, जीवविज्ञानी र अन्वेषकले भने, अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान शिक्षण फाउन्डेशनका निर्देशक हुन्।
कामका पाठकले विश्वव्यापी प्रश्नहरूको जवाफ दिने पुस्तकका लेखकसँग स्थिर संवाद स्थापित गर्न सक्दछन्। उदाहरण को लागी, केहि मानिसहरु लाई अध्ययन गर्न सजिलो समय किन छ पत्ता लगाउनुहोस्। लामो समयको ज्ञानको साँचो के हो जुन समय बितिसक्दा पनि स्मृतिमा रहन्छ?
बच्चाको दिमागले अभिभावकलाई समझायो
यो एल्वारो बिलबाओले गरेको कार्य हो जुन अभिभावकहरूको लागि रुचि हुन सक्छ जुन गर्मीको बिदामा यस विषयमा पुस्तकहरू पढ्न खाली ठाउँ खोज्न चाहन्छन्। बाल्यकाल जीवनको अवधि हो जहाँ केहि सब भन्दा सान्दर्भिक शिक्षा लिन्छ। र कसरी बच्चाको दिमागले काम गर्दछ? यो कामले यस प्रश्नको जवाफ दिन्छ।
प्रशिक्षण र अध्ययनका अन्य पाठकहरूलाई तपाईं के अन्य शीर्षकहरू सिफारिस गर्न चाहनुहुन्छ? ग्रीष्म readतुमा पढ्न न्युरोएडिकेसनका यी five पुस्तकहरूले तपाईंलाई प्रेरणा दिन सक्दछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » सुझावहरू » गर्मीमा पढ्नको लागि न्यूरोडिकेसनमा ation पुस्तकहरू